टेक्निकल एसईओ के हो? वेबसाइटहरूको प्राविधिक अनुकूलनको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण चरणहरू सिक्नुहोस् - Semalt
हामी जहिले पनि स्थितिको जटिल प्रकृतिमा जोड दिन्छौं - यसले मात्र धेरै चरणहरू समावेश गर्दछ, ती मध्ये केही दोहोरिने, तर व्यक्तिगत गतिविधिहरू पनि बिभिन्न रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। प्राय: जसो हामी SEO लाई साइटमा र अफ-साइटमा विभाजन गर्दछौं। आज हामी वेबसाइट स्थितिको अर्को श्रेणी छलफल गर्नेछौं - टेक्निकल एसईओ। यो के हो र यसले के गतिविधिहरू कभर गर्दछ?
यसबाहेक, यदि तपाईं एक पेशेवरको रूपमा एसईओ गर्न चाहनुहुन्छ वा यदि तपाईं उत्तम एसईओ उपकरणहरू नि: शुल्क पहुँच पाउन चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई आमन्त्रित गर्दछौं तिनीहरूलाई पत्ता लगाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यसका साथै हामीसँग मौसमी विशेषज्ञहरूको टोली छ जसले तपाईंलाई दिनको २ hours घण्टा मद्दत गर्न सक्दछ तपाईको कार्यलाई सजिलो बनाउनुहोस्।
अब, हामी पत्ता लगाउँनुहोस् के टेक्निकल सन्दर्भ भनेको के हो।
टेक्निकल एसईओ के हो?
टेक्निकल एसईओ सामग्री को बाहेक वेबसाइट भित्र अनुकूलन गतिविधिहरु लाई समेट्छ। प्राविधिक अप्टिमाइजेसनको लक्ष्य भनेको साइटमा रोबोटको लागि सजिलो बनाउँदछ। यद्यपि वेबसाइटहरू रोबोटका लागि होइनन्, त्यसैले प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकता र आराम पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ हामी गतिविधिका उदाहरणहरू प्रदान गर्न सक्दछौं जस्तै पृष्ठ लोड गर्ने गति, एन्क्रिप्टेड जडान कार्यान्वयन, वा मोबाइल उपकरणहरूमा राम्रोसँग प्रदर्शनको लागि पृष्ठ अनुकूलन पनि।
हामीले वेबसाइटको उपस्थिति र कार्यलाई अनुकूलन गर्ने यी तत्वहरूको बारेमा लेख्यौं हाम्रो ब्लग।
SEO प्राविधिक विश्लेषण उपकरणहरू
प्राविधिक अप्टिमाइजेसन कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ जब हामीलाई वेबसाइटको सर्त के हो भनेर थाहा हुँदैन र जहाँ काम आवश्यक छ। एनालिटिक्स टेक्निकल एसईओको अविभाज्य अंश हो, दुबै गतिविधिको योजनाको चरणमा र काम समाप्त भएपछि, प्रभावकारिता जाँच गर्न। तसर्थ, उपकरणहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न लायक छ:
AutoSEO : यो एक उपकरण हो जुन तपाइँलाई तपाइँको साइट को एसईओ अनुकूलन बनाउन को लागी र विशेष गरी Google र अन्य खोज इञ्जिनहरु मा यसको स्तर सुधार गर्न को लागी अनुमति दिनेछ।
पूर्ण एसईओ : यो एक आदर्श उपकरण हो जुन तपाईंलाई छोटो अवधिमा बढि दर्शकहरू र तपाईंको साइटमा ट्राफिकको माध्यमबाट बिक्री बढाउन मद्दत गर्दछ।
गुगल खोज कन्सोल - एक नि: शुल्क गुगल उपकरण जसले तपाईंलाई पृष्ठ अनुक्रमणिका स्थिति र यससँग सम्बन्धित कुनै त्रुटिहरू जाँच गर्न अनुमति दिन्छ।
साइट लाइनर - सीमित निःशुल्क पहुँचको साथ एक उपकरण जसले सामग्री डुप्लिकेसन र भाँचिएका आन्तरिक लिंकहरू जस्ता पक्षहरूको विश्लेषण गर्दछ।
Ahrefs - मुख्य रूपमा अफ साइट SEO विश्लेषणका लागि एक उपकरण हो, तर यसलाई वेबसाइटमा त्रुटिहरू ट्र्याक गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
फ्र्याम चीख - एक विस्तृत उपकरण जसले तपाईंलाई रोबोटहरूले पृष्ठ कसरी पढ्छ भनेर जाँच गर्न अनुमति दिन्छ, र यसैले पृष्ठ पढ्न र अनुक्रमणिकामा सम्भावित अवरोधहरू दर्शाउँछ।
डीप क्रोल - एसईओ र अधिकको प्राविधिक प्रभावकारिता जाँच गर्न एक जटिल उपकरण।
ओन्क्रॉल - समान उपकरण जसले तपाईंलाई वेबसाइटको अपरेशन र टेक्निकल पक्षहरूको विश्लेषण गर्न अनुमति दिन्छ, तर केवल एसईओको सन्दर्भमा मात्र होइन।
टेक्निकल वेबसाइट अप्टिमाइजेसनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू
यहाँ केहि महत्वपूर्ण चरणहरू छन् सफल एसईओको लागि पछ्याउन।
टेक्निकल एसईओमा साइटम्यापको कार्यान्वयन
एक XML वा HTML साइटम्यापले रोबोटहरूलाई साइट नेभिगेट गर्न र यसको संरचना बुझ्नको लागि सजिलो बनाउँदछ। यसले सब भन्दा महत्वपूर्ण उप-पृष्ठहरूको अनुक्रमणिका पनि गति गर्दछ, तिनीहरूलाई दर्साउँदै, र एकै साथ उप-पृष्ठहरू हटाउदैछ जुन हामी अनुक्रमणिकामा चाहँदैनौं।
साइट नक्शाले जानकारी पनि प्रदान गर्दछ जस्तै:
पृष्ठको अन्तिम संशोधनको मिति।
पृष्ठ अपडेटहरूको फ्रिक्वेन्सी।
साइटम्याप कहाँ पाउने? वेबमा त्यहाँ धेरै उपकरणहरू छन् जुन तपाईंलाई यो सिर्जना गर्न अनुमति दिँदछ। एउटा महत्त्वपूर्ण चरणले गुगल खोज कन्सोलमा साइटम्याप थप्दै छ र यसलाई प्रत्येक चोटि वेबसाइटमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्दा अपडेट गर्दैछ। केहि सीएमएसले तपाईंलाई वेबसाइट प्रबन्धन प्यानलको स्तरमा साइटम्याप सेट गर्न अनुमति दिन्छ, साथ साथै यसको स्वचालित अद्यावधिक पनि गर्दछ।
साइट नक्शाले तथाकथित अनाथहरूको समस्या हटाउँदछ। यी पृष्ठहरू हुन् जुन कुनै पनि आन्तरिक लिंक द्वारा लिंक गरिएको छैन र त्यसैले Google रोबोटहरूले पत्ता लगाउन सक्दैन। साइट नक्शाका लागि धन्यबाद, हामी निश्चित छौं कि रोबोट हाम्रो लागि महत्वपूर्ण सबै उप-पृष्ठहरूमा पुग्नेछ।
प्राविधिक अप्टिमाइजेसनको लागि रोबोट.टक्सट फाईलको कार्यान्वयन
हाम्रो वेबसाइटमा सबै पृष्ठहरू अनुक्रमणिका हुनु हुँदैन, अर्थात्, गुगलमा दृश्यमान। यी पृष्ठहरूमा उदाहरणका लागि शपिंग कार्ट पृष्ठ, गोपनीयता नीति, लगईन पृष्ठ, आदि समावेश छन्। यस अवस्थामा, प्राविधिक अप्टिमाइजेशनमा हामी पृष्ठहरूलाई अनुक्रमणिकाबाट बाहिर जान्छौं र हामी यो रोबोटको प्रयोग गरेर गर्छौं। फाईलमा हामी पृष्ठहरू राख्दछौं जुन हामी गुगल रोबोटका लागि साझेदारी गर्न चाहँदैनौं। यो जान्नु राम्रो हो कि यो वास्तवमा गुगलसँग काम गर्ने बखत, अन्य खोजी ईन्जिनहरूले रोबोट.टीएसटी मार्गनिर्देशनहरू अनुसरण गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन।
Robots.txt को भूमिका के हो?
यसले नक्कल सामग्री रोक्दछ।
खोजी, क्रमबद्ध, र फिल्टर पृष्ठहरू अनुक्रमणिकाबाट रोक्दछ।
यसले तपाइँलाई सर्वर प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईंको क्रल बजेट र अधिक बर्बाद नगर्नुहोस्।
रोबोट.टक्स्ट फाइल कहाँ पाउने? तपाईंले भर्खरै एउटा .txt फाईल सिर्जना गर्नुपर्नेछ र यसमा सबै उपपृष्ठहरू "अनुमति दिनुहोस् र अनुमति नदिनुहोस्" भ्यारीएबल प्रयोग गरेर वर्णन गर्नु पर्छ। त्यसोभए फाईललाई सर्भरमा राख्नुपर्दछ कि जुन यसमा उपलब्ध छ: domena.pl/robots.txt।
SSL प्रमाणपत्र कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण तकनीकी एसईओ चरणको रूपमा।
SSL प्रमाणपत्रको महत्व धेरै वर्षदेखि बढ्दो छ। विगतमा, यो एक आश्वासन थियो, मुख्य रूपमा अनलाइन स्टोरहरू द्वारा कार्यान्वयन, तर सधैं। सबै परिवर्तन भयो जब Google ले यसको क्रोम ब्राउजरमा "खतरनाक" साइटहरूको बारेमा प्रयोगकर्ताहरूलाई चेतावनी दिन थाल्छ। यो धेरैको लागि स्पष्ट भएको छ कि ग्राहकहरू त्यस्ता चेतावनीहरूद्वारा हराउन सक्छन्।
दोस्रो पक्ष त्यो हो कि SSL कनेक्शनहरू बढ्दो रूपमा वेबसाइट SEO मा क्रमबद्ध कारकको रूपमा उद्धृत गरिएको थियो। यसैले, अधिक र अधिक वेबसाइटहरूले सुरक्षा प्रमाणपत्र लागू गर्न सुरू गरे, जुन देख्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि यूआरएलमा, HTTPS को साथ शुरू, HTTP होइन।
टेक्निकल SEO मा नक्कल सामग्री रोक्दै
सामग्री नक्कल निर्माणकर्ता बाट विवरण प्रतिलिपि गर्नु भन्दा धेरै जटिल मुद्दा हो। यदि कसैले अन्य वेबसाइटहरुबाट पाठहरु प्रतिलिपि गर्छ भने उसले नतिजा लाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। तपाईंले कुनै पनि कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छैन, यो सिद्धान्त स्वीकार्नको लागि पर्याप्त छ कि हामी वेबसाईटमा केवल अद्वितीय, आफ्नै सामग्री थप्छौं।
यद्यपि एसईओ डुप्लिकेसनमा हामी उप-पृष्ठहरू बिच सामग्री प्रतिलिपि गर्ने काम गरिरहेका छौं, जसको बारेमा, लेमेनको रूपमा हामीसँग एउटा सुराग नहुन सक्छ। यदि उस्तै वा समान मिल्दोजुल्दो सामग्री बिभिन्न यूआरएलहरूमा देखा पर्दछ, गुगललाई कुन पृष्ठ क्रल गर्ने भनेर थाहा हुँदैन, त्यसैले यसले कुनै पनि क्रल गर्न सक्षम नहुन सक्छ, वा यसले सूचकांकमा लामो समय लिन सक्दछ। तपाईंले निश्चित रूपमा यो चेतावनी र गुगल खोजी कन्सोलमा अनुक्रमणिका त्रुटिबाट सिक्नुहुनेछ।
स्थिति कार्यान्वयन प्राविधिक अप्टिमाइजेशन त्यसैले नक्कलको घटना विश्लेषण गर्न र यसलाई हटाउने समाधानहरू कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार छ। यो प्राय: क्यानोनिकल लि of्कको कार्यान्वयन हो जुन सूचकांकको अधिकारको रूपमा धेरै समान व्यक्तिहरू मध्ये एक पृष्ठमा औंल्याउँछ। यस तरिकाले, रोबोटले नक्कल पृष्ठहरू विचार गर्दैन।
नक्कल अनावश्यक प्रकार्यबाट पनि परिणाम हुन सक्छ, जस्तै। उत्पादन पृष्ठमा सम्पूर्ण मार्ग युआरएलमा उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्दै। यस कारणका लागि, स्टोरहरूले फ्ल्याट URL/प्राथमिकता डोमेन/उत्पाद-नाममा प्राथमिकता दिन्छन्।
नक्कलको अर्को फारमसँग विभिन्न URL भेरियन्टहरूको साथ पृष्ठ रहेको छ। तपाईंले तत्काल पुनर्निर्देशनहरू लागू गरेर यस्तो हुनबाट रोक्नु पर्छ:
www बाट एक ठेगानाबाट www वा विपरित ठेगाना बिना;
HTTP ठेगानाबाट HTTPS ठेगानामा।
नक्कल पक्कै पनि एक जटिल समस्या हो र तपाईंले प्रत्येक पटक सहि समाधान रोज्नु पर्छ।
टेक्निकल SEO मा आन्तरिक लिंक अप्टिमाइजेसन
माथिका धेरै बिन्दुहरूमा हामीले पृष्ठ अनुक्रमणिका र रोबोट कसरी साइट वरिपरि घुम्छन् भन्ने बारेमा छलफल गरे। यस सन्दर्भमा, आन्तरिक लि ensure्क सुनिश्चित गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ, अर्थात् उप-पृष्ठहरू बीचको लिंक। एकतर्फी, आन्तरिक लिinking्कले रोबोटहरूको लागि एक संगठित संरचना र हाइरार्की सिर्जना गर्दछ, र अर्कोतर्फ, यसले तपाईंलाई वेबसाइटको अधिक महत्त्वपूर्ण उप-पृष्ठहरू संकेत गर्न अनुमति दिन्छ यदि हामी उनीहरूसँग लिंकहरू धेरै जसो निर्देशन गर्दछौं। यस कारणका लागि, ब्लग लेखसँग लिंक नभएकोमा ध्यान दिन लायक छ प्रस्ताव पृष्ठ भन्दा अधिक।
वेबसाइटमा कसरी तार्किक लिंक संरचना निर्माण गर्ने? आधार एक राम्रो डिजाइन गरिएको मेनू हो। पृष्ठ अनुक्रमणिका र स्थिति को संदर्भ मा, यो सिफारिश गरीन्छ कि लिंक संरचना सकेसम्म कम छ। गहिराइ पृष्ठहरु सम्मिलित छन्, अधिक समय ले रोबोटको उनीहरु सम्म पुग्न को लागी लिन्छ। मेनू डिजाइन गर्दा, यो दिमागमा राख्नु र धेरै धेरै उपश्रेणीहरू सिर्जना नगर्न लायक छ। एसईओ को संदर्भ मा, यो विभिन्न प्रकारका मेनुको प्रकार्यतामा भिन्नता जान्न पनि योग्य छ:
ड्रप-डाउन मेनू आदि।
अब मात्र थप्नुहोस् कि यदि मेनू आवश्यक छ भने, यसले हाम्रो आन्तरिक लि building्क निर्माणसँग सम्बन्धित १००% आवश्यकतालाई समेट्दैन। मेनूले केवल चयनित सबपेजहरू समावेश गर्दछ जुन हाइरार्कीमा उच्च छन्। बाँकीलाई बिभिन्न तरीकामा जोड्नु पर्छ, जस्तै। सामग्रीबाट।
यस अवस्थामा के सिफारिस गरिएको छ?
पृष्ठको शीर्षमा क्लासिक बार मेनूको अतिरिक्त ब्रेडक्रम्ब मेनू लागू गर्न यो राम्रो अभ्यास हो। ब्रेडक्रम्ब मेनू पृष्ठको माथि देखाईएको उपपृष्ठमा पहुँच मार्ग हो। यसले रोबोटको काम मात्र सजिलो बनाउँदैन तर प्रयोगकर्ताहरूका लागि नेभिगेसन पनि सजिलो बनाउँदछ।
आन्तरिक लिinking्क, तर केवल चयनित पृष्ठहरूमा, फुटरमा पनि गर्न सकिन्छ। यद्यपि यो जोड दिन योग्य छ कि हामी फुटरमा निश्चित संख्याको लिंक राख्दछौं र ती निश्चित रूपमा सबै उप-पृष्ठहरूमा लि links्कहरू हुनेछैनन्, किनकि यो एसईओ-मैत्री हुने छैन।
हामी विभिन्न तरिकाले आन्तरिक लि implement्क लागू गर्न सक्दछौं:
उप-पृष्ठहरूमा लिंकको साथ ग्राफिक बटनहरू सिर्जना गर्दै, उदाहरण: "प्रस्ताव हेर्नुहोस्";
विषयवस्तु उपयुक्त उपपृष्ठमा पाठमा एक वाक्यांश जोड्ने;
एक उपपृष्ठको एक सक्रिय यूआरएल जोड्दै।
पृष्ठ लोड गति र तकनीकी एसईओ
पृष्ठ लोड गर्ने गति क्रमबद्ध कारक हो, तर पृष्ठलाई एक सेकेन्डमा छिटो पार्दा पृष्ठ स्थितिमा शानदार प्रभाव पार्दैन। धेरै स्रोतहरूले संकेत गर्दछ कि एकदम ढिलो पृष्ठले एसईओलाई हानी गर्दछ, तर द्रुत पृष्ठले एसईओमा ठूलो परिणाम ल्याउँदैन। यो कस्तो छ? यो तपाईको आफ्नै केसमा परीक्षण गर्न लायक छ किनकि वेबमा वर्णन गरिएको विज्ञहरूको अनुभव सँधै सर्वव्यापी रूपमा लागू हुँदैन।
पहिलो चरण पृष्ठ गति जाँच गर्नु हो। तपाईं यसलाई हाम्रो वेबसाइटमा सित्तैमा गर्न सक्नुहुन्छ semalt.com। उपकरणहरूले सुझाव दिन्छ कि वेबसाइटलाई गति लिन के परिवर्तन गर्नुपर्दछ र कुन तत्वहरूले यसलाई भार दिन्छन्। जे होस्, यो जोड दिन लायक छ कि हामी प्रायः सुझावहरू प्राप्त गर्दछौं जुन पृष्ठलाई एक सेकेन्डले मात्र नभई, तर एक सेकेन्डको अंश द्वारा पनि गति दिन्छ। यस्तो गतिले महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउँदैन। यदि पृष्ठ यसको लोडिंग गति संग गम्भीर समस्या छ भने, सर्वर कारण हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा जब कारण बाह्य हुन्छ, स्थितिले सर्वरलाई राम्रोसँग परिवर्तन गर्न सिफारिस गर्न सक्दछ।
वेबसाइटलाई टेक्निकल SEO मा मोबाइल उपकरणमा रूपान्तरण गर्दै
गुगलले मोबाइल पहिलो सूचकांक लागू गरेदेखि अन्ततः वेबसाइट मालिकलाई यो महसुस भयो कि मोबाइलको उपस्थितिको महत्त्व छ। गुगलले घोषणा गर्‍यो कि यो मोबाइल संस्करणको आधारमा पृष्ठहरू अनुक्रमणिका र मूल्या rate्कन गर्दछ। यदि तपाईंसँग एक उत्कृष्ट डेस्कटप साइट छ, तर मोबाइल संस्करण बेवास्ता गर्नुहोस्, सिद्धान्तमा, तपाईंलाई पोजिशनिंगमा समस्या हुन सक्छ। यस बाहेक, डाटाले स्पष्ट रूपमा देखाउँदछ कि आधा भन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू मोबाइल उपकरणहरूबाट वेबसाइटहरू ब्राउज गर्नेहरू हुन्। त्यसोभए, एसईओ कारणका लागि मात्र होईन, यो सुनिश्चित गर्न लायकको छ कि सम्भावित ग्राहकले सबै जानकारी फेला पार्न, खरीद गर्न, बुक गर्न, र कम्पनीमा सम्पर्क गर्न सक्दछ।
लोकप्रिय उत्तरदायी वेबसाइटहरू सधैं उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभव ग्यारेन्टी गर्दैन। यो आयोजित गर्न लायक छ मोबाइल अनुकूलन परीक्षण, जसले हामीलाई कुनै त्रुटि देखाउँदछ।
यी हुन सक्छन्, उदाहरणका लागि:
बटनहरू पनि निकै नजिकबाट बसिरहेका;
पाठ आकार धेरै सानो छ;
प्रदर्शन भन्दा सामग्री फराकिलो;
दृश्य क्षेत्र अनसेट गर्नुहोस्;
दृश्य क्षेत्र उपकरण स्क्रिनको चौडाई फिट गर्दैन;
नमिल्दो प्लगहरूको प्रयोग।
प्राविधिक यूआरएल अनुकूलन
एसईओको प्राविधिक संदर्भमा, यो यूआरएल निर्माणको सम्बन्धमा राम्रो अभ्यासहरू लागू गर्न लायक छ। यसलाई टेक्निकल एसईओमा सिफारिस गरिएको छः
हाइफनहरू शब्दहरू अलग गर्नलाई अन्डरस्कोरको सट्टामा प्रयोग गर्नुहोस्;
विशेष वर्णहरू त्याग्नुहोस्;
केवल लोअरकेस अक्षरहरू प्रयोग गर्नुहोस्;
पढ्न योग्य URL हरूको ख्याल राख्नुहोस् जुन केहि अर्थ हो, र क्यारेक्टरको स्ट्रि; होइन;
URL मा एक वाक्यांश प्रयोग गर्नुहोस्;
ठेगानाको अधिकतम लम्बाइ छनौट गर्नुहोस् - यो धेरै लामो हुन सक्दैन, तर यसले उपपृष्ठको सामग्री प्रतिबिम्बित गर्नुपर्दछ।
यद्यपि हामी हालसालै डोमेनमा पोलिश मार्कहरू प्रयोग गर्न सक्षम भएका छौं, यसले इन्टरनेट मार्केटि inमा केहि समस्याहरू र समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
अर्को मुद्दा ठेगाना संरचना हो। हामी ठेगानाहरू बीचमा छनौट गर्न सक्दछौं जुन दिइएको मार्गमा पहुँच मार्ग प्रतिबिम्बित गर्दछ वा फ्ल्याट ठेगानाहरू बीच जुन डोमेन नाम र विशेष उपपृष्ठको नाम मात्र समावेश गर्दछ। दुबै संस्करणहरूमा उनीहरूका पक्षधर र विपक्षहरू छन्, त्यसैले हामी प्राय: मिश्रित प्रणालीलाई भेट्न सक्दछौं, उदाहरणका लागि। स्टोरहरूमा, हामी काटिएको संस्करणमा पहुँच मार्ग देख्छौं, तर उत्पादन पृष्ठमा, ठेगानाले डोमेन + उत्पादन नामको रूप लिन्छ।
वेबसाइटको प्राविधिक अप्टिमाइजेसन यो रोबोटको लागि पहुँचयोग्य बनाउन र एकै समयमा प्रयोगकर्ता-मैत्री बनाउनु हो। धेरै जसो एकल कार्यहरू हुन्, जसको अर्थ हो कि एक पटक पूर्ण टेक्निकल अप्टिमाइजेसन गरिन्छ, यसको लागि प्राविधिक मामिलाहरूमा फर्किनु आवश्यक पर्दैन। अपवाद परिस्थितिहरू हुन् जुनमा हामी वेबसाइटमा ठूला परिवर्तनहरू गर्छौं।
निश्चित हुनुहुन्न कि यदि तपाइँको वेबसाइट को टेक्निकल एसईओ चाहिए छ? थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।